NTULERIKOTA OLUNDI ACHI NA IGBO IZUGBE ~ Project Topics and Materials | Download Free Research Projects
Home » » NTULERIKOTA OLUNDI ACHI NA IGBO IZUGBE
Asusu obula di n’uwa nwere olundi e jiri mara ya. Asusu Igbo, dika otu n’ime asusu ato e nwere na Naijiria nwere olundi di iche iche ma nwekwaa Igbo Izugbe e jiri mara obodo niile na-asu asusu Igbo. N’edemede nchocha a nke isi okwu ya bu Ntulerikota olundi Achi na nke Igbo Izugbe, e lebara anya n’olundi Achi iji choputa myiri na ndiiche di n’etiti ya na Igbo Izugbe. Nwanchocha malitere site n’inye nkowa banyere ebe isiokwu a gbadoro ukwu. E nyere nkowa banyere olundi na Igbo Izugbe putara. A kowakwara abumnobi nchocha a nke gunyere ikwalite asusu Igbo. E metutakwara aka n’uru di iche iche nchocha a baara nwanchocha, umuakwukwo, ndinkuzi ndi ga-agu ya n’odinihu na ndi ga-eme nchocha nay a tinyere ndi nwere mmasi n’asusu Igbo. Nihi na nchocha nke e mere bu nke sovee, nwanchocha gara n’ogbe iri na abuo di n’Achi gbaa ndi okenye ajuju onu. E kere ndi maara aguede akwukwo ajuju nke ha zakwara. A kowakwara maka okere nchocha ebe a noro kowaputa na o bu naani Igbo a suru asu ka agbadokariri ukwu ihi choputa ihe digasi mkpa banyere olundi Achi. E deputakwara ajuju niile a juru ndi e jiri mee nchocha kesaa ha nye ndi nwere ike igu ha dika nid nkuzi na umuakwukwo. E ziputakwara otutu nnyocha ihe e derela banyere isiokwu nakwa nnyocha edemede nchoputa bu ndi e sitere n’akwukwo agumagu di iche iche e biputara ebiputa nwetasia nwanchocha lebakwara anya n’ihe gbasara usoro nchocha e mere bu ebe o noro wee rutu aka n’ihe e banyere udidi nchocha ebe ndi a noro mee chocha, ndi e jiri mee nchocha, nsere na usoro nsere nchocha, ngwa oru di iche iche e jiri mee nchocha. E tuchara ihe niile a choputara banyere olundi Achi ma tulerikota ya na Igbo Izugbe. Nwanchocha mechara chikota ihe niile o mere na nchocha a, tunyekwuo aro eti a ga-esi site n’ileba anya n’olundi di iche iche e nwere n’asusu Igbo mee ka asusu Igbo were onodu ua dike asusu tozuru etozu.
Crystal (1971) kowara asusu dika udaolu mmadu a haziri ahazi n’udi nke na-abughi ebumputa uwa mmadu n’onwe ya mebere e ji akowaputa echiche site n’okwu onu ma obu ederede. Nkowa nke a gosiputara na o bu mkpa mmadu nwere ime ka a mara ihe o bu n’obi kpalitere asusu. Nchoputa a choputara gosiri na e nwere ihe kariri nari asusu abuo na iri ise n’ime obodo anyi bu Naijiria. Asusu ndi putakariri ihe bu Igbo, Hausa na Yoruba. Asusu na-enwe olumba na olu onye nke a bu out njirimara asusu. Asusu Igbo nwere otutu olumba mejuputara ya nke ndi okammuta ufodu dika Ikekonwu (1985) kwuru na ekeree ya uzo isii, ka e si asu ya na obodo ebe na-asu ya gunyere;
Igbo Izugbe, dika e si ahuta ya; Anozie (1999) kwuru na e nwere ike iwere otu asusu kwuuru onwe ya maobu otu n’ime olumba mebere asusu obula jiri ya mebe Igbo Izugbe. Ihe di mkpa bu ileba anya were asusu maobu olundi nke mmadu niile nwere nmasi nay a jiri ya mere asusu izugbe. Nkowa nke a gosiri na o bu site n’olundi di iche iche ka e si achikoba ya. Nke a gosiri n o bu ihe di ezigbo mkpa ileba anya n’olu ndi iche iche iche mebere asusu Igbo ka wee site na ha mee ka asusu Igbo na-eto eto etu okwesiri. O bu nkw a so n’ihe kpaliri mmuo nwanchocha ime nchocha banyere olundi obodo ya bu Achi site n’itulerikota ya na Igbo Izugbe.
Otutu mgbanwe adila n’ebe asusu Igbo di nihi obibia nke uka na agumakwukwo nke ndi ocha biara n’ala Igbo wetara. O bu ihe doro anya na asusu bu otu n’ime omenala e ji amata agburu obula, mana a bia n’obodo anyi bu Naijiria taa, a ga-achoputa na oke agumakwukwo na mmepe di iche iche e meela ka agburu ufodu tumadu agburu Igbo na-eleda asusu ha anya ma nwee oke mmasi n’iwelite asusu agburu ndi ozo okasi asusu Bekee. O bughi naani na Igbo Izugbe na-alaghachi azu, kama nke jogburu onwe ya bu na mperimpe asusu di iche iche olundi mejuputara Igbo Izugbe na-anwuzi anwu. Ekele diri otu iwelite asusu na omenala ndi Igbo (SPILC) bu otu gbadosiri ukwu ike n’ala si na asusu Igbo agaghi ada n’ala ma obu nwuo anwu.
Nsogbu ozo bun a ihere na-eme umu akwukwo obuladi ndi nkuzi bu ndi Achi iziputa ihe ha bu n’obi mgbe ha na-aza ajuju a juru ha. Ufodu ndi a gbara ajuju onu eweputachaghi ihe a turu anya n’ihi na ihere isuputa olundi Achi na-eme ha.
Ebumnobi ozo e jiri mee nchocha a bu ka e site nay a nye aka iwelite asusu na omenala Igbo maka na o bu ihe ifufe isi na ndi Igbo na-ahapuzi ihe a kuru na-agba ihe ozo n’ihe gbasara isu asusu ha. O bughi naani na nwanchocha choro isite na nchocha nke a mee ka a mata ileda asusu Igbo anya ma sitekwa n’uzo di otu a welite asusu Igbo site n’ituputa ihe ndi di mkpa n’olundi Achi ga-enyere Igbo izugbe aka iji na-eto eto.
O bu eziokwu na olundi Igbo abughi otu ma o bu otu ihe ka ha na ekwu. N’edemede nchocha a, a ga-eleba anya n’ihe banyere olundi Achi na ntulerikota ya na Igbo izugbe. Ihe ozo a ga-eleba anya bu bu usoro odidiudasusu mkpurudasusu, usoromkpoputa na-abata n’olundi Achi nke puru iche n’igbo izugbe.
6. O nwere mgbochiume di n’olundi Achi nke na-adighi n’Igbo Izugbe?